Afaka Manatsoaka Lesona Tamin’ny Tantaran’ny Fihetsiketsehana Tao Però Ny Mpikatroka Manerantany · Global Voices teny Malagasy
Afaka Manatsoaka Lesona Tamin'ny Tantaran'ny Fihetsiketsehana Tao Però Ny Mpikatroka Manerantany
Nandika (en) i Scott Griffen
Voadika ny 02 Janoary 2017 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español
Fihetsiketeshana tao amin'ny kianja lehibe ao Arequipa, Però 2007. Azon'ny rehetra ampiasaina ny sary.
Ity lahatsoratra ity dia nampifanarahana avy amin'ny lahatsoratra navoaka tany am-boalohany tao amin'ny bilaogy, Perdido en Ítaca. Mifototra amin'ny fanambaran'ny fikambanana Provea (Fandaharan'asa Venezoelana Hanabeazana sy Hihetsehana Hiarovana ny Zon'Olombelona, narindran'ny mpanoratra sy ny mpikambana hafa), izay nanasokajy ny governemantan'ny filoha Venezoelana Nicolás Maduro ho “mpanao didy jadona,” taorian'ny fampiatoana ny fitsapan-kevi-bahoaka amin'ny fanalàna ny filoham-pirenena. Mamoaka dika nasiam-panovana tamin'ity lahatsoratra ity ny Global Voices, rehefa nahazo alalana avy amin'ny mpanoratra.
Ahoana no hiatrehanao ny fanjakana mpanao didy jadona? Mety ho hita amin'ny tantaran'i Però vao haingana ny valin-teny, raha nitsangana ny fiarahamonina ao an-toerana mba hanohitra ny governemantan'i Alberto Fujimori, izay nitondra teo anelanelan'ny taona 1990 ka hatramin'ny taona 2000, rehefa nandresy tamin'ny fifidianana in-telo misesy. Afaka miakatra fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ny didy jadona maoderina. Saingy rehefa tonga eo, dia afaka mampiasa ny firafidrafitry ny demaokrasia hanafoanana ny fifidianana marina ka hijanona tsy mana-pahataperana eo amin'ny fahefana
Manome fanadihadiana mahaliana amin'ny paikady fanentanana tao Però izay nanao izay hamparefo ny fitondrana Fujimori nandritra ireo taona ireo ny bokin'i Victor Vich mitondra ny lohateny hoe: “Tsy Fankatoavana Saimbôlika: Famitan-javatra, Fandraisana Anjara, sy ireo Politika tamin'ny Fiafaran'ny Fitondrana Didy Jadon'i Fujimori,” .
Natao hanefena karazan'olom-pirenena vaovao ireo famitan-javatra ireo ary nitady, avy eny an-dalambe, fahatakarana vaovao momba ny firenena sy ny tsiaro.
Ho an'i Vich, ny “fanonganan-tena tamin'ny taona 1992” no fanorenan-tsangambato, nahafantarana an'i “Lehishina”, araka ny ahafantarana an'i Fujimori, nanafoana ny Kongresin'i Però. Ravaravan'ny krizin'ny fisoloan-tena ao amin'ny firenena ireo antoko politika, “nanomboka hita lesoka ara-saimbôlika, ary indrindra indrindra, amin'ny tsy fahafahany maneho hevitra amin'ny resaka fananganana vondrona ara-tsosialy vaovao” ny [antoko] misongadina amin'ny fanoherana ny didy jadona.
Efa-taona taty aoriana, tamin'ny taona 1996, taorian'ny fankatoavana ny lalànan'ny Famotsoran-keloka mampiadi-hevitra izay nanome fiarovana ho an'ireo miaramila manamboninahitra voarohirohy tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, nitarika diabe izay nanangana taty aoriana ny hetsika “Isaky ny Rà, Isaky ny Zava-kanto“, nahavory vahoaka avy amin'ny foto-kevitra ara-politika isan-karazany ilay mpanao sary sokitra iray antsoina hoe Víctor Delfín. Hoy ny nosoratan'i Vich:
Nanomboka nandinika hevitra tena manan-danja ry zareo: fa ny ady amin'ny fitondrana jadona dia tsy maintsy kotsan'ny toetra ara-kolontsaina afaka manasaratsaraka sy manondro ireo sariohatra [na marika-hita-maso] mahery mety manova tanteraka ny fandraisana sary an-tsaina ôfisialin'ny fitondrana. Nanomboka nody ventiny tamin'ny alalan'ny marika-hita-maso sy ny zavakanto ny tolona handrodanana ny didy jadona.
Mirazotra amin'izany, taorian'ny fahalanian'i Fujimori fanintelony, nanomboka nanao fanetsehana ny vondrona artista iray hafa. Nanana zava-kendrena telo ity vondrona ity: hanaratsy ny voka-pifidianana, hitaky fifidianana vaovao ary manao izay isian'ny hetsika tsy fankatoavan'ny sivily. Hahatanteraka ireo kinendry ireo, dia manatontosa “fandevenana” ara-politika ny Birao Nasiônalin'ny Fifidianana anatin'ny lanonana eo anoloan'ny Lapan'ny Fitsarana ireo artista amin'ny fitondrana labozia, tapa-damba mainty, hazo fijaliana eny fa hatramin'ny vata-paty mihitsy aza.
Nambaran'ny lanonana amin'ny marika-hita-maso ny fahafatesan'ny fitondran'i Fujimori ka tsy ara-dalàna intsony manomboka hatreo ny zavatra ataony. Avy amin'izany hetsika izany no teraka ny Fikambanan'ny Fiarahamonim-Pirenena, izay mety ho nitana andraikitra goavana nandritra ireo volana nanaraka izany.
Fihetsiketsehana Mivantana sy Saimbôlika
Tamin'ny 27 Jolay 2000, olona manodidina ny 250.000 no nivory tao afovoan-tanànan'i Lima mba handray anjara amin'ny Diaben'ny Vazantany Efatra (Marcha dos cuatro Suyos), izay manondro ny vazantany efatra sy maneho amin'ny marika-hita-maso ireo faritra efatra mandrafitra ny Fanjakana Inca. Mahatratra hatramin'ny 40.000 ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny toerana samihafa ivelan'ny renivohitra. Fariparitan'i Vich ho toy “fihetsiketsehana lehibe indrindra sy voalamina indrindra teo amin'ny tantaran'ny Repoblika” io diabe io. Ny fahatokisana azo tamin'ny alalan'ity fihetsiketsehana ity no niteraka fihetsiketsehana saimbôlika sy amin'ny endrika vaovao hafa kokoa, ho setrin'ny firaisana tsikombakomba ataon'ireo antoko politika sasany amin'ny didy jadona.
Nalaza ny hetsi-panoherana iray “fanasàna sainam-pirenena” tamin'ny volana Jolay 2000. Araka ny filazan'i Vich, “ny hevitra dia ny hanorina hetsi-panoherana amin'ny marika-hita-maso izay miaty hafatra manafaka sy mampavitrika.” Nivory tao amin'ny Kianjan'ny Ben'ny Tanàna ao Lima ireo mpanao fihetsiketsehana isaky ny Zoma, mampiasa lamba mena, rano madio, ary “savony Bolívar” – nanomboka nanasa ny sainam-pirenena Peroviana imasom-bahoaka tao anatin'ny tontolo ahitana fety sy fihetsiketsehana ara-tsosialy izy ireo.” Raha vao voadio ny sainam-pirenena dia nahantona teo amin'ny fanahazan-damba lehibe. Nalaza tao amin'ny aterineto ny hetsi-panoherana ary tao anatin'ny fotoana fohy dia voasasa ny sainam-pirenena tany amin'ireo tanàndehibe manerana ny firenena.
Nipoitra indray ireo “fanasàna sainam-pirenena” ireo tamin'ny vanim-potoana taorian'i Fujimori, sy tany amin'ny firenen-kafa, ho fanoherana ny kolikoly sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Ny lahatsary eto ambany dia mampiseho fanasàna sainam-pirenena mandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny firotsahan'i ny Keiko Fujimori, zanakavavin'ny filoha teo aloha, hofidiana filoham-pirenena.
Nanambara ny haben'ny kolikoly izay miely manerana ny fiarahamonina Peroviana ilay lazaina ho fanafintohinana “Valdivideos“, andianà lahatsary mampiseho ny mpanolotsaina ambonin'i Fujimori manome kolikoly ireo politisiana ambony sy olo-malaza hafa manana herim-panintonana.
Ho an'ny Fikambanan'ny Fiarahamonim-pirenena, lasa nazava kokoa ny tanjona: Tsy resaka fandrodanana ny fitondran'i Fujimori sy Montesinos tsotra fotsiny izany, fa efa mankany amin'ny fananganana hetsika mivelatra ataon'ny olom-pirenena afa-miala amin'ny tsy-fisaziana efa manantantara ao Però. Niteraka endrim-pihetsiketsehana faharoa “Ataovy anaty fanariam-pako ny fako,” ity fanatontosan-javatra ity, ka nizaran'ny mpikatroka harona fasiana fako miisa 300.000 mahery mitondra ny sarin'i Fujimori sy Montesinos, nitafy akanjo mitsipitsipika fanao any anaty fonja. Napetraka tany amin'ny andrim-panjakana isan-karazany ny harona.
Nisy ihany koa ny fihetsiketsehana iray hafa antsoina hoe “Rindrin'ny Henatra” nametrahana tabilao manana haavo 15 metatra mitondra ny sarin'ireo mpitondra-tenin'ny fanaovana didy jadona nahantona imasom-bahoaka, ahitana hafatra ho azy ireo. Araka ny fanazavan'i Vich hoe: